धन्य कुनै विशेष नियम वा आहार सम्झना गर्ने छैन र राम्रो प्राप्त गर्न डर बिना समतल मात्र बेचिएको छ सबै मा भोज गर्न सक्छन्, ती भाग्यमानी हुन्। तर अरू सबैका लागि, त्यसैले एक अद्भुत संविधान र अवशोषित गर्ने क्षमता उपहार सबै स्वादिष्ट, छैन मात्रा मा वृद्धि, त्यहाँ उचित परिमाणमा खाएको गर्न सकिन्छ जो आंकडा को डर बिना केहि मिठाई, छन्। एक यी कार्बोहाइड्रेट व्यवहार को - marshmallows।
कति क्यालोरी एक marshmallow मा - सादा वा additives? उत्पादन को एक सय ग्राम 300 भन्दा बढी क्यालोरी पाइन्छ। तथापि, marshmallow 100 ग्राम - यो एकदम धेरै, एक ठूलो मात्रा क्यालोरी लागि compensates भनेर हो। यस सन्दर्भमा, धेरै राम्रो चकलेट zefirki। निस्सन्देह, तिनीहरूले यो सबै समय खान, तर कहिले काँही उठयो टुक्रा को एक जोडी एकदम सम्भव छ आवश्यक छैन भनेर, मीठा छन्।
मिठाई को संरचना गुण एक marshmallow र कति क्यालोरी मा एक प्रत्यक्ष प्रभाव छ। विनिर्माण प्रक्रिया एकदम सरल, सिद्धान्त मा छ। पहिलो, यो एक विशेष सस, फल वा बेरी बनाउँछ। अर्को चरण - चीनी र अन्डा को सफेद केही मात्रामा संग मसले आलु को एक मिश्रण। पछिल्लो चरण - gelatin, pectin वा agar को वाहेक। साथै, यी gelatinous पदार्थ प्रत्येक उपयोगी गुण को एक किसिम द्वारा विशेषता र marshmallow छन् कति क्यालोरी असर छ। थप marshmallows जैविक एसिड र फलाम मा धनी।
Pectin स्याउ, पाकेको तरबूज र स्वादिष्ट देखि उत्पादन चीनी चुकंदर। यो एक धेरै उपयोगी पदार्थ छ, रक्त शर्करा कम, कोलेस्ट्रल, हानिकारक धातु detoxifying, शरीर शुद्ध पार्छ। pectin को वाहेक संग तयार Marshmallow, त्यसपछि यसलाई शैवाल देखि झिकिएको छ एक हावा, प्रकाश बनावट र agar लागि जाँदा सूक्ष्म sourness छ, र यो फलाम, आयोडिन, र पोटासियम धेरै समावेश किनभने। उसलाई तंग, नहीं हावा Zephyr र अम्लता छैन। पशु मूल को उत्पादन उपास्थि र tendons देखि छुट्टयाएर गरिएका छन् - Gelatin नै छ। यसलाई चर्किएको र भंग को निको संग, हड्डी fragility लागि उपयोगी छ किन कि छ। यस्तो विनम्रता लायक एक marshmallow छन् कति क्यालोरी सोच छैन, बिस्तारै खाने। तर, यस्तो एउटा marshmallow मासु थोरै स्वाद महसुस हुन सक्छ।
zefirok को मुख्य लाभ: यो अद्भुत मिठाई यस्तो चकलेट र यसको डेरिवेटिव रूपमा कुनै बोसो। यस्तो marshmallows, जेली र pastilles रूपमा मिठाई मात्र केही कार्बोहाइड्रेट बनेको छन्। तर हामी एक marshmallow छन् कति क्यालोरी सम्झना गर्नुपर्छ: कुनै पनि गर्न चकलेट थपे पछि उपयोगी मिठाई मात्र क्यालोरी थप्छ। जबकि यो पक्कै पनि अविश्वसनीय स्वादिष्ट छ। खैर, एक सरल marshmallow पनि सीमा बिना प्रयोग गर्नु हुँदैन।
यो एक marshmallow सम्झना हुनुपर्छ कति मात्र क्यालोरी, तर पनि यसको स्वाद भेद गर्न। भेनिला र सादा सेतो marshmallows उपयोगी र हानिरहित छन्। तर marshmallow गुलाबी, currant एक बच्चा एलर्जी, यो सुत्केरी आमा प्रयोग भने हुन सक्छ। तसर्थ, हामी कुनै पनि मिठाई संग, marshmallows संग धेरै होसियार हुनुपर्छ। तर सबै को लागि आफ्नो सानो दोष पक्कै सबैभन्दा उपयोगी व्यवहार को छ। Marshmallow लगभग कुनै पनि आहार संग संयोजन, बस यो ज्यादा गर्न आवश्यक छैन।
आदर्श पुरुष र महिला को शरीर मा बोसो को के प्रतिशत छ?
Arachidonic एसिड, मानव शरीर फाइदाको वा हानि
साधारण क्यालोरी, लाभ र गुण
रातो मरिच को उपयोगी गुणहरू
अजवाइन। आकृति र समग्र स्वास्थ्य यसलाई प्रयोग।
नृत्य समर्थन पूरा को नियम
गुथना Entertaining - बच्चाहरु को लागि यो गतिविधि एक लोकप्रिय शौक बन्ने छ
"वोल्गा" 24 - भित्री मिलाउने
ब्रोंकाइटिस - लक्षण, कारण र स्वास्थ्य खतरहरुको
Limax Maximus: विवरण र फोटो
म "Kanefron" स्तनपान पिउन सक्नुहुन्छ?
तपाईँको हातको हत्केलामा मा भाग्य रेखा भविष्यवाणी?
Ligers - सिंह र बाघ को संकर
बंध्यकरण बिना जाडो लागि स्वादिष्ट भिटामिन फल पेय संरक्षण गर्न सिक्न
घर रक्सी लागि नुस्खा: अङ्गुर देखि रक्सी कसरी बनाउने